कुन–कुन देशले गरे नयाँ संविधानको स्वागत ? - Nepal News - Latest News from Nepal
कुन–कुन देशले गरे नयाँ संविधानको स्वागत ?
By nepalnews	 On Sep 23, 2015
काठमाडौं, असोज ६ । अमेरिका , फ्रान्स, जर्मनी, युरोपेली युनियन (ईयू)ले नयाँ संविधानको स्वागत गर्दै नेपाललाई बधाई दिएका छन् । उनीहरुले संविधानमै अडेर समस्या समाधान गर्दै असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्नसमेत सुझाएका छन् ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जोन कर्बीले मंगलबार वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा संविधान घोषणा महत्त्पूर्ण कोसेढुंगडा भएको उल्लेख गरे । ‘सबै नेपालीलाई शान्तिपूर्ण तथा अहिंसात्मक माध्यमद्वारा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा संलग्न भइरहन हामी प्रोत्साहित गर्दछौं,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सबै नेपालीका विचार समेट्न जारी राख्नुपर्ने अमेरिकी सुझाव छ । भूकम्पपछि पुननिर्माणमा जुटेको वर्तमान अवस्थामा अमेरिका सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख छ । भारतले नयाँ संविधानबाट नेपालको शान्ति पूरा भएको टिप्पणी गरेको छ । यसअघि बेलायत, चीनलगायत मुलुकले संविधान घोषणाप्रति खुसी व्यक्त गर्दै स्वागत गरिसकेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
एक रुपैयाँ ठग्दा पाँच हजार जरिवाना
भारतीय गुप्तचर निकाय रअका पूर्वप्रमुखद्धारा संविधानको समर्थन